Saraakiil katirsan Nabad Sugidda oo Galbeedka Muqdisho lagu dilay iyo qarax AMISOM lagula eegtay Siinka dheer. – Shabakadda Amiirnuur
Saraakiil katirsan Nabad Sugidda oo Galbeedka Muqdisho lagu dilay iyo qarax AMISOM lagula eegtay Siinka dheer.
September 21, 2019 4:55 pm by admin Views: 116
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax xooggan oo maanta gudaha magaalada Muqdisho lagula beegsaday saraakiil katirsan ciidamada Sirdoonka dowladda Federaalka Soomaaliya.
Wararka laga helayo degmada Dharkeynleey ayaa sheegaya in ugu yaraan 2 sarkaal oo katirsan ciidamada Nabad sugidda ay dhinteen 2 kalane ay dhaawacyo soo gaareen kadib markii qarax lala helay gaarigii ay la socdeen.
Ilo wareedyo ayaa xaqiijinaya in labada sarkaal ee qaraxa lagu dilay mid kamida uu ahaa nin caan ah waxaana magaciisa lagusoo gaabiyay Aadam Cali Macallim kaas oo ku magac dheeraa Musmaar.
Musmaar ayaa caan ku ahaa dhibaataynta dadka shacabka ah oo uu udhaadhicin jiray xabsiyada qarsoodida ah ee Sirdoonka dowladda uu ku leeyahay gudaha magaalada Muqdisho halkaas oo lacago baad ah uu uga qaadan jiray.
Wararka ayaa intaas ku daraya in dhaawac culus uugaaray 2 kamida saraakiisha Sirdoonka iyadoona ay waxyeello gaartay gaarigii ay wateen saraakiisha labeegsaday, dhinaca kale laba askari oo Yugaandheys ah ayaa dhintay tira kalane dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii gaari xamuul ah lagu qarxiyay duleedka Muqdisho.
Goob joogayaal ayaa sheegay in qarax miino oo ka dhacay deegaanka Siinka dheer lala eegtay ciidamo katirsan dowladda Uganda gaar ahaan qeybta qaabilsan Lojiistikada saad gudbinta.
Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa sheegatay dhammaan mas’uuliyadda weeraraa maanta ka dhacay gudaha Muqdisho iyo duleedkeeda, Al Shabaab ayaa sare uqaadday weerarada ay u adeegsanayso qaraxyada ee ka dhanka ah cadowgeeda.